Anglisy ho an'ny mpitsoa-ponenana, Asylees, SIV, ary ireo niharan-doza amin'ny fanondranana olona - Ivontoerana fampianarana amin'ny fiteny roa
Anglisy ho an'ny mpitsoa-ponenana, Asylees, SIV, ary iharan'ny fanondranana olona an-tsokosoko
Momba ny departemanta RSS an'ny BEI
Kilasy tsy misy vidiny ho an'ny mpianatra mendrika
Fanohanana ny fiteny (espaniola, arabo, frantsay, Farsi, Pashto, Swahili, Tiorka)
Ny serivisy fanohanana azo
Fanohanan'ny Referral amin'ny mpiara-miasa amintsika
Ny fandraisan'anjaran'ny fiaraha-monina ao amin'ny departemanta
Ny Ivon-toeram-pampianarana Bilingual Education (BEI) dia nanompo ireo mpianatra mpitsoa-ponenana sy mpifindra monina nandritra ny 40 taona. Nandritra ny telopolo taona farany, ny BEI dia nanome kilasy ESL ho an'ireo mpifindra monina vaovao an'arivony, mpitsoa-ponenana, mpitsoa-ponenana, tra-boina, ary mpitsidika avy any ivelany izay misolo tena ny sehatra ara-tsosialy, ara-panabeazana, ara-poko ary ara-toekarena rehetra. Ny BEI dia manome fampianarana manara-penitra ho an'ny mpianatsika, mandrisika azy ireo hanatratra ny akademika, ny fandraharahana ary ny fiaraha-monina maneran-tany sy eo an-toerana. Ny zava-bita amin'ireo sehatra ireo dia manome hery ny mpianatsika amin'ny fianarana fiteny ary ahafahan'izy ireo mampiseho fandrosoana amin'ny fahaizany miteny. BEI dia manana traikefa amin'ny fampianarana teny anglisy amin'ny fahaiza-manao isan-karazany: Basic Literacy, ESL, Intensive English Program, Job Readiness, ary Workplace ESL ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fiarovana sy ny fianarana miteny sy voambolana mifandraika amin'ny asa. Ny kilasy mifandraika amin'ny asa dia niara-niasa tamina karazana indostria maro samihafa: serivisy sakafo, trano fisakafoanana ary hotely, famokarana, ary insulation fanafanana sy fampangatsiahana. BEI dia ao anatin'ny Consortium Houston Refugee an'ireo mpanome tolotra mpitsoa-ponenana izay niara-niasa nandritra ny 15 taona farany. Mizara ny famatsiam-bolam-panjakana toy ny RSS, TAG, ary TAD ny fikambanan'ireo masoivoho mpiara-miombon'antoka amin'ny ezaka hanomezana tolotra mahomby sy holistic kokoa ho an'ireo mpitsoa-ponenana monina ao Houston. Nandritra ny 10 taona lasa, BEI no mpiantoka voalohany ho an'ny Fandaharan'asa Fanabeazana RSS rehetra ary manana traikefa be dia be amin'ny fanofanana, consultation, ary fanaraha-maso ny fanarahan-dalàna momba ny programa sy ny vola mba hiantohana ny vokatra mahomby amin'ny fandaharan'asa fiaraha-miasa.
Tamin'ny 1988, BEI dia iray amin'ireo sekoly tsy miankina vitsivitsy any Texas nomen'ny US Immigration and Naturalization Service hampianatra teny anglisy sy sivika amin'ireo mpifindra monina vao nahazo famotsoran-keloka tao amin'ny faritr'i Houston. Ao amin'ny 1991, BEI dia lasa subcontractor consortium miaraka amin'ny Houston Community College System manome ESL (ambaratonga 1, 2 & 3) novatsian'ny National Literacy Act (NLA) an'ny 1991, PL 102-73. Tamin'ny taona 1992, ny BEI dia nahazo famatsiam-bola avy amin'ny Governemanta Fanentanana manohitra ny fanavakavahana amin'ny asa, izay nahazoan'ny BEI fankasitrahana miavaka avy amin'ny Governemanta noho ny tolotra nomena. Nanomboka tamin'ny 1995 ka hatramin'ny 1997, ny BEI dia nanome ireo mpianatra, izay mpitsoa-ponenana ny ankamaroany, Fiofanana momba ny fitantanana birao amin'ny fiteny roa. Ny fandaharan'asa dia novatsian'ny JTPA Title II-A, II-C/ Houston Works. Tamin'ny 1996, nahazo famatsiam-bola ho an'ny Texas Citizenship Initiative (Fanaraha-maso ny zom-pirenena) avy amin'ny TDHS, Biraon'ny fifindra-monina sy ny raharahan'ny mpitsoa-ponenana ny BEI. BEI dia nanompo ny filàna fanabeazana ho an'ny mponina mpitsoa-ponenana ao amin'ny distrikan'i Harris nanomboka tamin'ny 1991, tamin'ny alàlan'ny RSS, TAG, ary TAD fanomezana avy amin'ny TDHS, ankehitriny dia fantatra amin'ny anarana hoe HHSC.
© Copyright 2022 Institiota Fampianarana Bilingual